Prime Day - အက်ပဲလ်ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအပေးအယူများ (နေ့ ၂၂ ရက်) | အိုင်ဖုန်းသတင်း
Prime Day - Apple ထုတ်ကုန်များအတွက်အကောင်းဆုံးအပေးအယူများ (နေ့ ၂၂ ရက်)
Ignacio Sala | 22/06/2021 16:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 22/06/2021 16:05 | အိုင်ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, အိုင်ပက်
ယနေ့ဇွန်လ ၂၂ ရက်သည်ယနေ့ ၁၁း၅၉ နာရီအထိကျွန်ုပ်တို့အားဤပလက်ဖောင်းမှရရှိနိုင်သောကမ်းလှမ်းမှုအမြောက်အမြားကိုအခွင့်ကောင်းယူရန် Amazon ချုပ်၏အသုံးပြုသူဖြစ်လျှင်သင်ရရှိနိုင်သောဒုတိယနှင့်နောက်ဆုံးသောနေ့ဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါး၌ ကျနော်တို့မနေ့ကတင်ခဲ့သည်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာကမ်းလှမ်းမှုအမြောက်အများကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ မရှိတော့ပါ။ သို့သျောလညျး, ငါတို့မနေ့ကထုတ်ဝေသောထက်တန်းတူသို့မဟုတ်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့အခြားကမ်းလှမ်းမှုရှိပါတယ်။
1.2 ယူရို ၁,၀၉၉ မှ iPhone 12 Pro ကို
2.1 ယူရို ၈၂၉ မှ iPad 2021
2.2 ယူရို (၄၀၄) မှ iPad Mini 2019
2.3 IPad ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
3.1 eufy 2K နှင့်အတူ HomeKit ကို ၃၃.၉၉ ယူရို
3.2 ၁၈၈ ယူရိုအတွက် AirPods Pro
3.3 ၁၂၉ ယူရိုအတွက် AirPods
3.4 ၁၉၉ ယူရိုအတွက် Nuki Combo စမတ်သော့ခတ်
3.5 ၁၀၉ ယူရိုအတွက် Netatmo မိုးလေဝသဌာန
3.6 ၁၈.၈၉ ယူရိုအတွက် MagSafe သဟဇာတဖြစ်သောကားအားသွင်းစက်
3.7 MagSafe 2-in-1 desktop charger ကိုယူရို ၃၉.၁၉
ယနေ့ Apple ရောင်းချသောစျေးအချိုဆုံး iPhone သည် iPhone SE ဖြစ်သည် ၄.၇ လက်မမျက်နှာပြင်သည် iPhone 4,7 နှင့်ဆင်တူသည်.
ပုံစံ 256 GB ကိုယူရို ၅၄၉ ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်, 128GB ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ် ၂၅၆ GB ဗားရှင်းထက် ၄ ယူရိုပိုများသည် entry ကိုမော်ဒယ်, 64GB ဗားရှင်းနေစဉ် အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပေးထားပါတယ်ခဲ Apple Store ၏တရားဝင်စျေးနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လျှော့စျေး: 449 ယူရို။
256GB သိုလှောင်မှုနှင့် Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုဗားရှင်း 979 ယူရိုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျန်မော်ဒယ်များ သူတို့ကအဘယ်သူမျှမလျှော့စျေးရှိသည်၂၀၂၁ က ၁၂.၉ လက်မမော်ဒယ်လိုပဲ။
El ဒုတိယမျိုးဆက် Apple ခဲတံပုံမှန်ဈေးနှုန်းမှာ ၉၉ ယူရိုရှိပြီးယနေ့နှင့်မနက်ခင်းအကြားရှိသည်။ သာ 67,25 ယူရိုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်.
ဒုတိယမျိုးဆက်မော်ဒယ်, ၁၁ လက်မ iPad Pro ဒုတိယမျိုးဆက်နှင့် ၁၂.၉ လက်မ iPad Pro 11rd Generation နောက်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်, 111,50 ယူရိုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်၎င်း၏ပုံမှန်စျေးနှုန်း 135 ယူရိုအခါ။
အသစ်က iPad Pro 5th Generation အတွက် Magic Keyboard (2021) 12,9 လက်မရရှိနိုင်ပါသည် Apple Store ရှိဈေးနှုန်းအတိုင်း ၃၉၉ ယူရိုရှိသည်။ ဒီမော်ဒယ်ဟာ ၂၀၂၀ မော်ဒယ်နဲ့မတူဘဲ keyboard နဲ့ iPad Pro ကိုအံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်သတိပြုမိဖို့လိုပါတယ်။
eufy 2K နှင့်အတူ HomeKit ကို ၃၃.၉၉ ယူရို
eufy 2K ကင်မရာ၊ ကျွန်တော်တို့မှာလုပ်ခွင့်ရှိပြီးသား iPhone News တွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ, 49,99 ယူရိုကနေ 33,99 ယူရိုမှအနိမ့်။ မဟုတ်ပါဘူး HomeKit နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်Apple ၏ Home Secure သည် (iCloud မှတဆင့် 200 GB ကျော်စာချုပ်ချုပ်ဆိုလျှင်) လည်းထပ်တူဖြစ်သည်။
၁၉၉ ယူရိုအတွက် Nuki Combo စမတ်သော့ခတ်
Nuki စမတ်သော့ခတ်၊ အခြားကိရိယာများ ကျနော်တို့ Actualidad iPhone အတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါပြီကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းမှအိမ်၏တံခါးဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည် HomeKit၊ Google Assistant နှင့် Alexa တို့နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
ပုံမှန်စျေးကတော့ ၂၆၉.၉၉ ယူရိုပါ။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ရနိုင်ပါတယ် သာ 199,99 ယူရိုသည် တစ်နေ့တာလုံး။ အထူးသ Nuki Combo 2.0 သော့ခတ်ခြင်းသည် Amazon ရွေးချယ်မှုထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၁၀၉ ယူရိုအတွက် Netatmo မိုးလေဝသဌာန
109 ယူရိုသည် ကျွန်ုပ်တို့မှာ Netatmo မိုးလေဝသဌာန၊ Apple's HomeKit နှင့် Amazon Alexa တို့နှင့်လိုက်ဖက်သောဘူတာရုံတစ်ခုရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့မှာလည်းရှိသည် အမှန်တကယ် iPhone ပေါ်တွင်စမ်းသပ်ပြီး, ထိုအချိန်က HomeKit ကမပံ့ပိုးခဲ့ပေမယ့်, နှစ်ပေါင်းစုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့ကဆက်ပြောသည်ခဲ့လိုက်ဖက်တဲ့. ဤမိုးလေဝသဌာန၏ပုံမှန်စျေးနှုန်းမှာယူရို ၁၄၉ ဖြစ်သည်.
၁၈.၈၉ ယူရိုအတွက် MagSafe သဟဇာတဖြစ်သောကားအားသွင်းစက်
18,89 ယူရိုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စွန့်ပစ်မှုတွင် c ရှိသည်MagSafe သဟဇာတဖြစ်သောကြိုးမဲ့ကားအားသွင်းစက် ထုတ်လုပ်သူ HaloLock မှမည်သည့် iPhone 12 မော်ဒယ်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့၏မော်တော်ယာဉ်၏ဒိုင်ခွက်တွင်အားသွင်း။ နေရာချရန်ခွင့်ပြုသည်။
MagSafe 2-in-1 desktop charger ကိုယူရို ၃၉.၁၉
Choetech ကျွန်တော်တို့ကိုaပေးထားပါတယ် MagSafe 2-in-1 လိုက်ဖက်တဲ့ကြိုးမဲ့အားသွင်းစက် ဥပမာအားဖြင့်၊ AirPods ၏ကြိုးမဲ့သေတ္တာကိုအားသွင်းရန်အားသွင်းရန်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုပါရှိသည်။ ဒီ charger မှာ ၁ မီတာရှိတဲ့ USB-C cable နဲ့ 1 W မြန်သော power adapter ပါ ၀ င်ပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » အိုင်ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » Prime Day - Apple ထုတ်ကုန်များအတွက်အကောင်းဆုံးအပေးအယူများ (နေ့ ၂၂ ရက်)
အိုင်ယာလန်သည် Apple နှင့်အခြားအကြီးများအတွက် ၁၂.၅% နှုန်းကိုတိုးမြှင့်ရမည်
ICloud Calendar Spam Apple အတွက်ပြStillနာတစ်ခု